लेख को मार्केटिङ मा "वाह-प्रभाव" को सक्रिय बिक्री बढाउने एउटा आधुनिक तरिका रूपमा प्रयोग बारेमा बताउँछ। यस्तो सौन्दर्य ब्लगर्स को विज्ञापन उत्पादन, provocation को प्रभाव, नमूना परीक्षण, fotoprezentatsiya रूपमा छलफल विधिहरू।
रूपमा "वाह-प्रभाव" प्रयोग?
धेरै बालिका परिहाल्छ कि साधारण मनोवैज्ञानिक हुक, सौन्दर्य को प्रतिज्ञा छ। को चमकदार विज्ञापन को प्रभाव अघि भन्दा कम भएको छ। धेरै को लागि, यो विज्ञापन मोडेल हटाइएका छन् भन्ने कुनै गोप्य प्रयोग "Photoshop" र यति मा छ।
विज्ञापन ठाउँमा कुनै पनि कस्मेटिक्स प्रयोग देखि आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्ने सौन्दर्य ब्लगर्स को आए। भिडियो हेर्दै पछि, अवचेतन मा धेरै जाने र यो किन्न इच्छा ट्रिगर। विज्ञापनदाता मा "वाह-प्रभाव" प्रयोग , एक उत्पादन प्रचार छिटो खरिद गर्न दर्शक प्रोत्साहन, तर अक्सर अभ्यास मा, खरिद सामान प्रयोगकर्ताहरूको आशा सफाइ छैन।
उदाहरणका लागि, सलाहकार प्रस्ताव ग्राहकहरु क्रीम कल्पना र परिणाम रमाइलो गर्न प्रयास गर्न नि: शुल्क स्किनकेयर गर्दा, धेरै तिनीहरूले प्रविधी "वाह-प्रभाव" प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि अनजान छन्। तर अक्सर मानिसहरूले यो माल लाभप्रद विशेषताहरु को एक सूची संग भ्रममा।
आज, कस्मेटिक सौंदर्य सैलून को बहुमत नयाँ ग्राहकहरु आकर्षित गर्न एकदम सफलतापूर्वक यो विधि प्रयोग। आखिर, कुनै नियमित ग्राहकहरु छ भने, र कस्मेटिक उत्पादनहरु को बिक्री केही कम हुनेछ। तदनुसार, यो लाभ मा एक थोपा गराउँछ। को "वाह-प्रभाव" को प्रयोग गरेर ग्राहकहरु आकर्षित को एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक हालतमा छ।
छाला हेरविचार लागि कस्मेटिक उत्पादनहरु को बिक्री मा "वाह-प्रभाव"
उत्पादन को एक आश्चर्यजनक दृश्य को छाप बलियो बनाउन भर्ना बजार क्षेत्रहरु को एक किसिम मा पाउन सकिन्छ। आक्रामक मार्केटिङ पदोन्नति को प्रयोगमा नेताहरू बीच गरेको छाला छ अंकित को "वाह प्रभाव" संग। कस्मेटिक्स को खरीदारों मा पहिलो र मुख्य विचार एक सबै व्यक्तिगत को कि छाला हुनुपर्छ।
Nahvalennye क्रीम र छाया को सना मा सलाहकार प्रतिज्ञा कि प्रतिक्रिया दिन सक्दैन। तिनीहरूले विपरीत मा, उपचर्म र अन्य तीव्र को सुनिंनु हुन सक्छ। कुनै एक कुनै पनि कस्मेटिक उत्पादन व्यक्तिगत छाला प्रतिक्रिया देखि प्रतिरक्षा छ। उपकरण गरेको छाला छनौट गर्दा अनुहार छाला यसको उच्च (कम) मूल्य ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन।
बिक्री मा "वाह-प्रभाव": उदाहरणहरू प्रयोग
दायरा चयन कस्मेटिक उत्पादनहरु को हाल धेरै उच्च छ। आफ्नो पसलमा अधिक ग्राहकहरु आकर्षित गर्न, बिक्री प्रबन्धकहरू सक्रिय "वाह-प्रभाव" को विधि प्रयोग गर्दै छ।
एक पेशेवर उत्पादन सुइट्स रूपमा कस्मेटिक उत्पादन को स्थिति;
को मापदण्ड "सडक बनावट", "ब्रान्ड" मा क्रेता गरेको जोर;
कुनै पनि एजेन्ट गरेको छाला छाला वा अनुहार लागि मेकअप को प्रयोगबाट इच्छित प्रभाव को प्रतिज्ञा, जस्तै वाक्यांश मोहक आवेदन "स्पंज को इच्छित राशि बनाउन";
स्थिति उच्च गुणवत्ता कस्मेटिक आइटम धेरै उच्च मूल्य सम्बन्धित।
"वाह प्रभाव" कम अन्त संग मतलब
त्यहाँ समीक्षा किनभने आफ्नो उत्कृष्ट मूल्य-प्रदर्शन अनुपात सकारात्मक छन् जो "वाह-प्रभाव" गर्न उपकरण, छन्। र तिनीहरूलाई धेरै। उदाहरणका लागि, "वाह प्रभाव" संग अब छाला kometiki अनुहार धेरै चाँडै एक कम मूल्य मा बेचे। उच्च गुणस्तर र hypoallergenic गरेको छाला छाला यी एजेन्ट संग प्रतिज्ञा।
अब एक कम मूल्य, $ 30 को बारे छ भनेर लोकप्रिय समीक्षा Yes2Carrots क्रीम। तिनीहरूले धेरै बालिका-सौन्दर्य ब्लगर्स घमण्ड। तर भीड खरिद यो क्रीम पछि, धेरै खरीदारों छाला स्थलहरू ढाकिएको। को क्रीम या त बाहिर निकाल वा उहाँले नजिक जसलाई अर्को व्यक्ति, दिन थियो।
निम्न उदाहरण "Chanel" काजल। विज्ञापन मोडेल lashes काजल देखाउनुहुन्छ। भोल्युम प्रभाव, "वाह-आवेग" coveted ट्यूब को समतल टाढा झाडू गर्न दुकानदारों हजारौं बनाउन।
सामान्य मा, काजल को विकल्प विशुद्ध व्यक्तिगत कुरा हो। सलाहकार यसको सुखद गन्ध, उज्ज्वल डिजाइन र फिक्सिंग बनाउन-अप एक सुपर-क्षमता संग भन्न। तर प्रतिज्ञा गरिएको परिणाम, धेरै ग्राहकहरु समीक्षा द्वारा न्याय, यो देखिने थियो।
को इन्टरनेटमा "वाह प्रभाव" संग विज्ञापन उत्पादनहरु
कस्मेटिक्स निर्माताहरु वेबसाइटहरू, ब्लगहरू मार्फत पदोन्नति लामो ध्यान र "इन्स्टाग्राम" छ। तिनीहरूले प्रस्ताव कस्मेटिक्स को ब्रान्ड को कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन विभागमा काम सफल सौन्दर्य ब्लगर्स। तिनीहरूले व्यवहार मा प्रयोग को एक सिंहावलोकन बाहिर राखिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न कस्मेटिक्स पठाउनुहोस्।
अझै समीक्षा गर्न उत्पादनहरु पठाएको नगर्ने ब्लगर्स, पनि, विज्ञापनदाताहरु बारी गर्न थालेका छन्। स्वाभाविक, सकारात्मक र laudatory कस्मेटिक्स बारेमा सबै समीक्षा। अब मात्र यी सर्वेक्षण उद्देश्य र सत्यवादी हो, अर्को प्रश्न हो।
सौन्दर्य ब्लगर्स अक्सर, आफूलाई, कस्मेटिक्स "Oriflame" मनाइरहेको उदाहरणका लागि, उनको के समीक्षा गरेको छाला गर्न पठाइने अर्थ अन्य कम्पनीहरु मा एक विस्तृत र उद्देश्य जानकारी दिन।
अझै तिनीहरूले सामान, नमूना र यति मा को संरचना जानकारी प्रदान किनभने सर्वेक्षण ब्लगर्स धेरै उपयोगी छन्।
खपत मा provocation को विधि
कुनै पनि सामान र पनि कस्मेटिक उत्पादनहरु को बिक्री, खपत मा provocation को विधि प्रयोग। उहाँले artificially कुनै पनि कस्मेटिक उत्पादनको लागि दौड हतार कि सन्तुष्ट छ। सामान सर्तहरू मा प्रसव मा प्रतिबन्ध, घोषणा गरे।
मतलब "उपलब्ध" सबै किन्न प्रयास छ कामोत्तेजक हुन्छ। अन्त मा, तिनीहरूले प्राप्त। तर अनलाइन साइटहरु मार्फत आँखा बंद खरीद सधैं खरीदार गरेको आशा सफाइ छैन। यो उपयुक्त गंध, रंग र धेरै अन्य कारक हुन सक्छ।
को "वाह प्रभाव" संग सही जानकारी को उत्पादनहरु बारेमा धारणा लागि सिफारिसहरू
हेर्नुहोस् कस्मेटिक्स समीक्षा आवश्यक छ, तर तिनीहरूले विज्ञापन उत्पादन को तत्काल खरिदका लागि एक कारण हुनु हुँदैन।
यसलाई व्यक्तिगत कस्मेटिक हालतमा को संरचना अध्ययन गर्न आवश्यक छ। मूल्य ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन। यो राम्रो गुण को एक ग्यारेन्टी छैन।
यो रंग र बनावट व्यक्तिगत चरित्र छ भनेर सम्झनु पर्छ। सामान को एक विशेष ब्रान्ड चयन गर्न, यो ध्यानपूर्वक छाला प्रकार संग संरचना र अनुकूलता अध्ययन गर्न आवश्यक छ। उपकरण धेरै भन्दा इन्टरनेट साइटहरु मार्फत, एक खुदरा चयन गर्न राम्रो छ।
कम से कम एक पटक एक cosmetologist र मेकअप कलाकार व्यावसायिक स्तर भ्रमण गर्न यो आवश्यक छ। तिनीहरूले छाला हेरविचार र शरीर मा सबै भन्दा सही सल्लाह दिन हुनेछ। एकै समयमा यो व्यक्तिगत विशेषताहरु खातामा हुनेछ।
धेरै उपकरण खरिद आफूलाई लागि सही हेरविचार मदत छैन। यसो गर्न, तपाईं यति मा, रहनसहन overlaying क्रीम लागू र को प्रविधी सिक्न आवश्यक छ।
सस्तो किन्न, तर अनुचित हालतमा आवश्यक छैन। यो बजेट बचत असर गर्छ।
कस्मेटिक उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या सौन्दर्य को एक ग्यारेन्टी छैन।
किन "वाह-प्रभाव" को लागि आवश्यकता?
बिक्री प्रबन्धकहरू, को पाठ्यक्रम, खाता सबै इच्छा र ग्राहक को चासो ले प्रयास गर्नुहोस्। एक "वाह-प्रभाव" संग उत्पादन सहज र प्रयोग गर्न व्यावहारिक हुनुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य ग्राहकहरु को आवश्यकता पूरा गर्न छ।
सधैं माथि यी इच्छा मिति हुन, तपाईं लक्षित दर्शक, तिनीहरूले के हो बुझ्न मदत गर्नेछ जो बीच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
उपभोक्ता मा अवस्थित समस्या समाधान हुनेछ भनेर एक उत्पादन, एक "वाह प्रभाव" सक्छ। सम्बोधन मात्र खरीदार, तर पनि विश्वसनीयता प्रभावित वृद्धि गर्नुपर्छ। उत्पादन लागि मांग को विकास को लागि तपाईं एक राम्ररी योजना विकास गर्न आवश्यक छ।
को "वाह प्रभाव" संग विज्ञापन सौंदर्य उत्पादन को उदाहरण:
सौन्दर्य उत्पादन सौन्दर्य अंकित। एक क्रीम को विकास क्रम उन्मूलन दोस्रो गाला र चिउँडो sagging बुझाइएको। यसको प्रयोग सर्जरी बिना सिद्ध अनुहार लिफ्ट योगदान पुग्छ।
उत्पादन सप्ताहन्तमा सबै गरेको छाला पैसा superseding, Le सप्ताहन्त डी Chanel अपग्रेड गर्नुहोस्। सामाग्री Glycolic र salicylic एसिड, मृत कक्षहरू कोमल आन्दोलन Exfoliating समावेश गर्नुहोस्। यो उत्पादन प्रयोग को प्रभाव उज्ज्वल र toned अनुहार बन्नेछ।
Clarins डबल सीरम देखि कायाकल्प सीरम। विरोधी उमेर बढन सीरम 20 एक छाला मर्मत प्रक्रिया प्रदान, तरकारी घटक समावेश छ। को सीरम लागू को परिणाम लोचदार छाला, कम झुर्रियाँ बन्नेछ।
hyaluronic एसिड Nanomic Hyalo बेलुन सीरम शामिल गहन सीरम Cefine। 17 पटक मा एसिड कारण पानी बढ्छ को मात्रा। यो उत्पादन प्रयोग बाट तत्काल परिणाम झुर्रियाँ एक महीन छ।
Darphin द्वारा घिउ अंकित भएको Revitalizing तेल, तरुण छाला पुनस्थापित। यसको प्रयोग मार्फत छाला कक्षहरू, Fed बलियो र चिस्यान राख्ने।
मास्क बदलाव तत्काल अनुहार Revitalizing, छाला नवीकरण गरिनेछ। mechanically र रासायनिक यो Exfoliates। यसको प्रयोगले Microdermabrasion प्रक्रिया द्वारा परिणाम बराबर छ। यो झुर्रियाँ कारण, अनुहारको रुप रंग सुधार गर्छ।
प्राइमर Touche Eclat धमिलो। यो लोप र छाला अनियमितताहरु भएकोले उज्ज्वल प्रभाव हुन्छ।
अक्सिजन मास्क सेतो हीरा आइस-ग्लो। NuBo कम्पनी सक्रिय अक्सिजन संग सार्थक मास्क प्रदान गर्दछ। यो अनुप्रयोग धन्यवाद यसलाई mesotherapy, लसीका जल मालिश र cryotherapy जस्तै प्रभाव छ।
Aurealux अनुहार लागि मास्क। यो छाला, रंग र प्रकाश को चिस्यान भर्नु दस मिनेट छ। सुन Flavo-रेशम Tricomplex को पेटेंट जटिल सुन कणहरु समावेश छ। उहाँले उत्पादन छ।
मास्क Glamglow Supermud Ckearing उपचार, तत्काल फोहोर pores, सफा मुखासे र rashes dries।
कार्य कम संग एसके-द्वितीय अनुहार उपचार मास्क मास्क। यसको प्रयोग धन्यवाद छाला र यसको चिस्यान को सुरक्षा कार्य दुरुस्त राखेको छ।
वितरण - यो मुनाफा लागि अनन्त दौड छ
मास्को मा वितरण संग फूल पसल
कसरी "Aliekspress" मा एक बहस रद्द गर्न: बयान
सामाजिक विज्ञान प्रणाली मा समाज
साक्षरता अभियान: "सम्पर्कमा" पृष्ठ बनाउन कसरी
प्रक्रियाहरू को दस्तावेज जब सेवाहरू क्षेत्र मा एक प्रक्रिया दृष्टिकोण लागू
एलन Iverson: खेल उपलब्धिहरु र जीवनी
विभिन्न स्तर को मध्यस्थता कोर्ट को शक्तिहरु
व्यापार सूचना (विशेषता)। प्रशिक्षण पछि कसलाई काम गर्ने?
रोकथाम र gynecological विकार को उपचार। उपयोगी जानकारी र समीक्षा। "Gynecological" - एक प्राकृतिक उपाय समस्या धेरै छुटकारा प्राप्त गर्न
होस्टहरूको। रोपण र हेरविचार